Shiinaha Aluminium Dome Madaxa Indha Indheynta leh Warshad Madaxa Weyn iyo soosaarayaasha | Yuke
Waxyaabaha: Aluminium jirka / birta birta ah
Dhammaystirka dusha: Boolish / Zinc oo la daboolay
Kooxdayada injineerada khibrada leh waxay horumarin karaan badeecada isla markaana soo saari karaan si waafaqsan shaybaarka, sawirada ama fikradaha kaliya.
Midabada kaladuwan ee rivets indha la '
Noocyo kala duwan oo rivet indhoole ah. oo ay ku jiraan madaxa wareega dhamaadka dhamaadka, madaxa furitaanka miiska madaxa, dhamaadka dhamaadka madaxa weyn rivet indho la 'iyo wixii la mid ah.
Waqtiga Lead: 15 ~ 20 Maalinta Shaqada ee '20' Weelka, 5 maalmood haddii ay keyd leeyihiin
2. Sanduuqa midabka yar ,, sanduuqa midabka khaanadda 45degree, sanduuqa daaqada, polybag, fin. Baakad qolof ah ama macaamiisha looga baahan yahay.
YUKE waxay leedahay awood wax soo saar oo xoog leh waxayna iibisaa xirayaasha heerka xirfadeed. Wax soo saarkayagu wuxuu waafaqsan yahay nidaamka tayada caalamiga ah, sida ANSI iyo BS.
Shirkadeena waxay bixisaa xirayaal xirfadlayaal ah oo tayo sare leh oo loogu talagalay dhinacyada warshadaha, sida baabuurta, dhismaha, isgaarsiinta, korantada, tamarta, qalabka guryaha korontada iyo alaabta guryaha, iwm Sanado badan oo horumar ah, waxaan hubin karnaa tayada alaabadayada.
Ku soo dhawow inaad la tashato, gorgortanto oo aad amarto dhammaan xirmooyinka taxanaha ah ee ganacsade ka socda waddamada oo dhan, dhammaanteen waan bixin doonnaa –tilmaamaha Adeegga “hal-joogsi gabi ahaanba” adiga kuu ah.
Hore: Dome Head Blind Rivet ahama Steel
Xiga: Wareeg Bixiyaha Buuxda ee birta ah ee birta leh ee Madaxa Weyn